Abavelisi be-ceramic yesiko ukuvavanya umlilo kwi-crucible | XTL
IiCrucibles zethu zinika uBomi obude, ukuNyibilika ngokukhawuleza, ukunyibilika okungaguqukiyo kunye nokuxhathisa okuKhethekileyo kuTshintsho loBubushushu obunobundlobongela.
Iimilo ezahlukeneyo kunye nobukhulu ziyafumaneka ex stock ngobukhulu 20, 30, 40, 50 kunye 65 gram ezifanelekileyo kwiinkqubo multi ukulayisha. Uyilo olukhethekileyo lunokuveliswa ukuhlangabezana neenkcukacha zomntu ngamnye. Iikhreyibhile ziya kupakishwa kwiibhokisi zomthi okanye kwiibhokisi zekhadibhodi ezilungele ukuthunyelwa ngaphandle.
Uluhlu lweeMilo eziKhethekileyo zeCeramic zinokwenziwa ngesicelo.
I-Ceramic Crucible yayisetyenziselwa ukunyibilika kunye nokwahlula iintsimbi ezixabisekileyo kwi-ore.
Iyakwazi ukumelana nokuphindaphinda ukothuka kwe-thermal ukusuka kwi-1300 degrees celcius ukuya kwiqondo lobushushu begumbi.
Custom fire assay crucible I-crucible yeceramic eqhelekileyo